आज पनि बढ्यो सुनचांदीको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रतितोला मूल्य कति…. – SUDUR MEDIA
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल भाद्र २ गते बुधबार अर्थात साताको चौथो दिन पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । हिंजो मंंगलबार प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । छापावाल सुन हिजो प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तेजावी सुन हिजो प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, आज चाँदीको भाउ भने घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १२ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला १२ सय १० रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । लामो समयदेखिको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारी र लकडाउनसँगै ह्वात्तै बढेको सुन चाँदीको मूल्यमा पछिल्लो समय केही घट्बढ् हुने गरेको छ ।